Jaranjarada si aad ugu rinjiyeeysid darbiyada qaab asli ah, u isticmaal! | Bezzia
Jaranjarada si aad ugu rinjiyeeysid darbiyada qaab asli ah, u isticmaal!
Maria vazquez | 02/04/2021 18:00 | La cusbooneysiiyay 30/03/2021 19:11 | Samee naftaada
Waxaa jira qalab noo ogolaanaya beddel muuqaalka qolka si fudud oo raqiis ah hadana iyagu nagama caan badna. Jaangooyooyinka loogu talagalay rinjiyeynta derbiyada, oo sidoo kale loo yaqaan 'stencil', ayaa tusaale u ah tan.
Iyada oo jaangooyooyin loogu talagalay rinjiyeynta derbiyada qolka waad ku badali kartaa saacado yar gudahood. Waxay kuu fududeyn doonaan inaad ku abuurto qaabab ku celcelis ah darbiyada oo xiisaha qolka ku kordhin doona. Laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaan doonaan inaad abuurto ujeeddooyin gooni ah oo soo jiita dareenka gees gaar ah. Waxbadan ka baro kuwan!
1 Waa maxay jaangooyooyinku?
2 Iibso ama abuur samayso sheybaar kuu gaar ah
3 Stencil ku mari rinji rinjiga
Waa maxay jaangooyooyinku?
Stencil-ku waa sheybaarado laga sameeyey shey gaar ah oo waxay u adeegaan shaxan shaxan dusha sare adoo maraya midabka jeexjeexyada dusha ka saaran. Qeexitaan dheeri ah oo dheeri ah ayaa laga heli karaa Qaamuuska Akadeemiyada Isbaanishka Boqortooyada:
Ka yimid Ingiriisiga. istiin
1. m. Arg., Bol., Chile, C. Rica, Cuba, Méx., Nic., Pan., R. Dom. Iyo Ven. Qalabka sheyga gaarka ah ee istiin
Laga soo bilaabo lat. extergēre 'masax, nadiifi'.
1. tr. Sawirada shaambada, xarfaha ama nambarada adoo marinaya midabka, oo leh qalab ku habboon, inta loo marayo goynta lagu sameeyay xaashida.
Iibso ama abuur samayso sheybaar kuu gaar ah
Suuqa waxaad ka heli doontaa jaangooyooyin fara badan oo loogu talagalay rinjiyeynta derbiyada oo ka samaysan waxyaabo caag ah inaad dib u isticmaali karto marar badan. Moodellada ku dayanaya shaxanka tiles-yada dabka, iyo sidoo kale kuwa leh joomatari ama ubaxyo ubax ayaa ah kuwa ugu caansan.
Maxaa dhacaya haddii aanan ku qancin sheybaar kasta? Kadib waxaan ka abuuri karnaa sheybaaradeena sawir gacmeedkeena ama kuwa kale ee aan ka helno internetka. Tan waxaad u baahan doontaa aqoonta aasaasiga ah ee maaraynta qaar Barnaamij naqshad u eg Photoshop iyo madbacad oggol in lagu daabaco xaashiyo caag ah. Lahaanshaha mid ka mid ahi caadi maaha, laakiin inta badan dhib maahan in dukaanka nuqul laga helo magaalooyinkeenna.
Miyaadan u baahnayn wax sidaas u xirfad badan? Haddii hal-abuur iyo xirfad ay tahay waxaad leedahay, waxaad abuuri kartaa arrimo kuu gaar ah adoo adeegsanaya kala-baxayaasha balaastigga daloollan, kuwii aan ku abaabuli jirnay dukumiintiyada guriga, iyo jarjaran si fiican loo afeeyey.
Stencil ku mari rinji rinjiga
Markaad haysatid shaxankaaga qurxinta, waxaa la joogaa waqtigii la diyaarin lahaa rinjiga oo gacmahaagu wasakh noqon lahaayeen. Laakiin xaggee ka bilaabeysaa? Haddii fikraddaadu tahay inaad ku celceliso qaab isku mid ah si isku mid ah gidaarka oo dhan, waxa ugu fiican ayaa noqon lahaa inaad sawirato a xariiq toosan bartamaha derbiga si loogu adeego hage ahaan abuurista xariiqa koowaad ee qaabka.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, markii aad dooratay meesha aad dhigayso tusaalaha, talaabada xigta ayaa noqon doonta ku dheji darbiga iyadoo la kaashanayo cajalad yar oo wejiga duubata. Waxaan rabnaa inaan ka fikirno ka hor intaadan daryeeshin inaad daboosho dabaqyada iyo dusha sare ee wasakheyn kara, sax?
Marka template la diyaariyo, waxaad ku dalban kartaa rinjiga siyaabo kala duwan. Waxaad ku rinjiyeyn kartaa darbiga adiga oo isticmaalaya rullaluistemadka rinjiga si loo gaaro sawir isku mid ah ama loo mariyo rinjiga adigoo ku dhajinaya isbuunyo si loo gaaro saameyn duug ah. Haddii aad leedahay dhowr stencil aad ku dhejin karto gidaarka, buraash hawo sidoo kale waxay noqon kartaa bedel wanaagsan. Dooro farsamada aad ugu jeceshahay ama sida ugu fiican adiga kugu habboon oo aad shaqo ku hesho!
Marka rinjiga lagu dhajiyo shaxanka ugu horreeya, waxaa la joogaa xilligii la fiiqin lahaa oo meel cusub la dhigi lahaa. Inta badan stenens rinjiyeynta derbiyada ayaa leh sharraxaad cad si ay isugu toosiyaan markaa qaabku waa hagaagsan yahay, markaa waa inaad kuwan raacdaa.
Hubso inaad nadiifiso jaangooyooyinkooda waqti ka waqti oo aad beddesho cajaladda wejiga si aad uga fogaato inaad jiido rinjiga markaad beddesho stencil ama shaqada oo dhan ayaa saameyn doonta. Hadana xor ayaad u tahay inaad hubiso in qaababka soo noqnoqda ay badbaadinyaan khadadka jiifa iyo kuwa toosan waqti ka waqti.
Hadda oo aad taqaanid sida loo isticmaalo jaranjarada rinjiga derbiyada, miyaad ku dhiiran doontaa inaad ku beddelato muuqaalka derbiyadaada kuwan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Samee naftaada » Jaranjarada si aad ugu rinjiyeeysid darbiyada qaab asli ah, u isticmaal!
Faa'iidooyinka deegaanka ee guryaha yaryar
Maalinta Autismka adduunka, maxay tahay iyo sidee bay ugu dhex shaqeyn karaan bulshada